Mayelana NATHI - Dongguan Hengyao Ultrasonic Machinery Co., Ltd.
I-Dongguan HengYao Ultrasonic Machinery Co, Ltd. eyasungulwa ngonyaka ka-2016, iyibhizinisi lokukhiqiza elinochwepheshe elenziwe ngemishini ejwayelekile (umshini wesifihla-buso, umshini wokwenza okungewona owelukiwe, umshini we-othomathikhi we-ultrasonic), ukukhiqizwa kwesikhunta esihlukahlukene esizenzakalelayo, kanye nokuhlinzekwa nokuthengiswa kwezesekeli.
Mayelana neHengyao: I-Dongguan HengYao Ultrasonic Machinery Co, Ltd evela kumqondo wobuchwepheshe obuphambili weJapan neTaiwan. Ngeminyaka engu-20 umkhakha ohola phambili, sigxila ocwaningweni, ekwenziweni nasekuthengisweni kwemishini ezenzakalelayo ehlukahlukene engalukanga. Inkampani yethu itshalwe ngabantu asebekhulile emgqeni womshini ozenzakalelayo ongalukanga. Iqembu lethu amabhizinisi e-Shenzhen, Dongguan, Foshan, Xiamen, Suzhou, Nantong njalonjalo.
Ububanzi bebhizinisi: Umugqa wokukhiqiza obuso obuzenzakalelayo bezokwelapha, umshini wokukhiqiza ubuso obuzenzakalelayo, umshini wokuhlanganisa umshini we-valve othomathikhi we-N95, umshini wokwenza imaski we-3D othomathikhi, umshini wokupakisha imaski wobuso othomathikhi, umshini wokwenza okokuhlunga womoya othomathikhi. Ukufaka izesekeli nohlelo lwe-ultrasonic lomshini ohlukahlukene ongelukiwe. Futhi ngokuzimela sathuthukisa futhi senza izinhlobo ezingaphezu kuka-30 zemishini. Insimbi ehlakaniphile nemishini yokwenza umuntu isetshenziswa kakhulu emkhakheni wezabasebenzi, ezokwelapha, ukuthuthwa kwendle, ezemfundo, ihhotela, ezokundiza, ubuso.
Umqondo wenkampani: "imikhiqizo kuqala, ubuchwepheshe kuqala, ikhwalithi kuqala, nensizakalo kuqala". "Ukwakha inani elengeziwe lekhasimende" kuyinjongo yethu. Iminyaka engama-20 isipiliyoni nokudlula kulo mkhakha masenze inqubekela phambili ndawonye, ​​futhi sizokwenza njalo isahluko esisha emgqeni womshini wokuzenzakalela ongalukanga.